Ka anyị nyochaa ihe dị ọhụrụ na Ubuntu 11.10 | Site na Linux
Ka anyi nyochaa ihe ohuru na Ubuntu 11.10
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nkesa, GNU / Linux, Noticias
E nwere sonso ụbọchị abụọ ruo mgbe mwepụta nke Ubuntu 11.10, na agbanyeghi na nduku anaghị ebugharị m ụbọchị a, enweghị m ike ịnabata ma kweta na akụkọ na-atọ ụtọ na-abịa maka ndị ọrụ ya. Ka anyị hụ ole na ole si n'elu.
1 Font Ubuntu.
2 Na akwụkwọ ahụ aja.
3 Gburugburu Gburugburu.
4 Dị n'otu na Compiz.
6 Ubuntu Centerlọ Ọrụ Software.
7 More nchịkọta ke DVD mbipute.
8 More karị….
Ka anyị malite na ngalaba kachasị amasị m maka nkesa a, ya akwụkwọ edemede. Dịka anyị kwurula na mbụ, N'elu ugwu ekwukwa ọhụrụ variants maka Ezinụlọ Font Ubuntu. O kwere omume na Ubuntu Font Monospace abịa na ndabara na ọnụ.
Na akwụkwọ ahụ aja.
Enweela ike ịgbanwe ego ndabara, anyị ekwuola banyere ha n'ime Site na Linux y anyị na-ahapụ njikọ ahụ ibudata ha.
Ihe ọzọ masịrị m Ubuntu na na e ubé retouched na-enye ha ihe ndị ọzọ anya na mara anya: Isiokwu Gtk ambience y Mgbasawanye. Ugbu a, ogwe ngwaọrụ ahụ dịkwa oji (ma ọ bụrụ ambience).
Dị n'otu na Compiz.
Ịdị n'Otu ọ na-agbakwunye ndozi ma na-enweta nkwụsi ike na ntozu okè. Ejikọtara nke ọma Gbasara, ugbu a, anyị nwere nhọrọ Bias na Tab + Alt. Site na nhọrọ a, a ga-ebu ụzọ gosipụta ngwa ndị ahọrọ.
icon Ubuntu ahapụwo panel ahụ ma nyefee onye na-ebubata ihe na Dash egosi mara mma uzo na utịp blur, gbakwunyere atụmatụ ndị ọzọ.
Daalụ ka ọ jọrọ njọ GDM de Gnome. LightDM bụ onye njikwa nnọzigharị ọhụrụ nke gụnyere, na mgbakwunye na ịnweta ọfụma ka mma, ohere nke banye na 3D Avatar.
Ubuntu Centerlọ Ọrụ Software.
Na Lọ Ọrụ Ngwanrọ de Ubuntu. Ugbu a, ọ dị ka ụlọ ahịa ngwa, yana akara ngosi ọhụụ nke etinyere n'ime ya.
More nchịkọta ke DVD mbipute.
Versiondị ahụ DVD ga-enwekwu ndị nchịkwa, Nvidia, ATI na bcmwl-kernel-isi iyi. Anyị nwere ike ịnweta nchịkọta desktọọpụ ndị ọzọ dịka XChat, Nautilus-gksu o Na-egbu ndụ. A ga-enwekwu akwụkwọ ọkọwa okwu na akwụkwọ nchịkọta ọzọ.
Enwere nkọwa ndị ọzọ na-agbanahụ m, n'ihi na anaghị m eji Ubuntu, ma nke anyị ga-ekwu maka otu oge ha mere ọkwa gọọmentị ma anyị nwalee ya nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ka anyi nyochaa ihe ohuru na Ubuntu 11.10
Ihe 50 kwuru, hapụ nke gị
onye maara ihe dijo
M na-echegbu onwe m! na-agụta awa iji budata DVD mbipute.
N'ezie ụdị a anaghị adọta uche m, enwere ike n'ihi na Gnome3 anaghị adọta m nke ukwuu 🙂
Cheta na ịdị n'otu bụ ihe na-abịa na ndabara, ọ bụghị Gnome3
Égbè eluigwe dijo
Unitydị n'otu bụ Gnome 3 Shell, yabụ na nyocha ọ na-eji Gnome3, ọ bụ ezie na ọ bụghị Gnome Shell, ma ọ bụ ya mere m ghọtara: S
Zaghachi Thgbè Eluigwe
N'oge a kpọmkwem Unity bụ Shell mana maka Gnome2, ọ bụrụ na emesịa ha gafee / depụta Unity niile maka GTK3, mgbe ahụ ọ ga-abụ Shell maka Gnome3.
Isi okwu ya bụ na ihe niile ma ọ bụ ihe niile ha kwuru “Gnome3”, ha pụtara Gnome3 + GnomeShell hehe.
N'ezie, Unitydị n'otu abanyela Gtk3
Ee amaara m, mana nke a bụ ụdị izizi nke Ubuntu (distro na ndị ọzọ na-eso ụzọ) nke ga - enye ohere ịnwale Gnome3, mgbe m kwuru ịnwale ya, m na - ekwu ihe dị mfe, ọ bụghị etu o si dị ugbu a ị ga - ahazi PPA, wụnye nchịkọta na zipu mmụọ ọjọọ ahụ Unity consciously 🙂
Mgbe ọtụtụ afọ nke iji Ubuntu na PC m. Wụnye ọbụna betas na RC gị. Dị 11.04 gụnyere ịkwaga na nhọrọ ndị ọzọ.
Yiri mere m na netbook m. Mgbe niile na akwụkwọ ndekọ ma ọ bụ ugbu a na obere netbook m jiri Fedora na Gnome. Ebe ọ bụ na nke ikpeazụ version m ga-akwaga.
Yabụ ịdị n'otu na Gnome 3 dị m n'anya na ugbu a ha anaghị egbo mkpa m (anaghị m akatọ ndị na-ejere ha ozi). Mana nke bụ eziokwu bụ na nkwụsi ike nke Debian na PC m yana PCLinuxOS juru ya anya na netbook, ụbọchị a gafere na-enweghị oke ịnụ ọkụ n'obi dịka ọ dị n'oge ochie Ubuntu wepụtara.
Nke ahụ bụ ihe ọzọ, na Unity ma ọ bụ Gnome3 adịghị egbo mkpa anyị, na-emegharị ka ịdị mfe nke Gnome dịka ọmụmaatụ, ọ pụtaghị na maka ndị ọzọ ọ bụ ajọ distro. Ekwenyere m na gị.
Ka-eme ihe n'eziokwu. Mgbe obula Ubuntu ohuru putara, Uncle Mark kwere nkwa mgbanwe di uku nke gha adaba na ntaneti Gtk ma obu akara ngosi. Ugbu a mgbanwe ndị ahụ pụtara ìhè, Unitydị n'otu (ma otu mbipụta Mac ma ọ bụ Na-esote ..) na-esetịpụ ụzọ nke ya ma na-enye Ubuntu ya njirimara, m na-ekwughachi, ma ọ bụ otu ma ọ bụ na ọ bụghị.
Kedu distro ọzọ (ma e wezụga Ubunty na ElementaryOS) raara onwe ya nye ịmepụta interface dị mma maka ndị ọrụ ya? N'ihi na ahụbeghị m nke ahụ nwere. Eeh, ụfọdụ na-emezi KDE ha, ndị ọzọ bụ Gnomes ha, mana nke ahụ anaghị eme. Ha bụ otu desktọọpụ gburugburu.
Ọ bụ na ha achọghị mgbanwe? Ọfọn e nwere ha.
Na-ele ya anya n'ụzọ ahụ ma ọ bụ n'echiche, ee, ị ziri ezi ... anyị rịọrọ maka mgbanwe ma ugbu a, ha na-apụta, mana mmadụ bịara ... anyị na-arịọ maka mgbanwe, mana mgbanwe maka mma ọ bụghị maka njọ. Ka Ubuntu dị iche iche na-apụta ìhè, otu a na-enwekwu chinchi na enweghị nkwalite ha na-eweta ¬_¬
Gwa m otu ihe: Kedu ihe ị na-ekwu n'ihe niile ị na-ekwu? Maka na m maara na ahụbeghị m Ubuntu 11.10 Beta emelitere na PC gị ọ bụla. Ahụbeghị m na ị nwalere Unity zuru oke iji kwuo na Ubuntu nwere ọtụtụ Bugs. Ekwula ihe sitere na ihe ndị ọzọ na-ekwu, nwalee ma katọọ dabere na ya.
Mara: Ọ bụghị na m na-agbachitere Ubuntu, mana emela ka otu ndị ọrụ ahụ Obi ike na-akatọ nke ukwuu, ndị na-enye data ụgha iji chebe nkesa ha na-eji.
Gbalịrị ịdị n'otu na Natty yabụ echiche m, mgbe 11.10 pụta MAYBE M ga-anwale ya na pc mebere.
Na ... ah ... m na-adabere n'eziokwu na m hụrụ (dị ka gị) ka ọnụ ọgụgụ nke chinchi na enweghị nsogbu larịị mụbara n'etiti 8.04 na nke ugbu a 10.10, na na m ịdabere, na na m dabere m chere, echefula na m na-ejikwa Ubuntu ruo ọtụtụ afọ, ya mere enwere m ike ịchọpụta ole nsụgharị nke distro a "tozuru etozu" ¬_¬
Dị n'otu na Natty, Natty…. Nke ahụ dị ka m .. Ahh ee, ị nwara ịdị n'otu nke nwere ọnwa 6 nke mmelite, mmelite na ndozi ahụhụ. Bịa na onye òtù ọlụlụ, onye ka ị na-egwu egwu?
HAHAHA onye obula, agwagorom gi ... ha anaghi akwu m ugwo ma obu obere ka m weta ma obu wepu ndi oru Ubuntu LOL
Mgbe m nwara ya ọ bụ ruo ụbọchị, yabụ echiche m. Ọ bụrụ na amaghị m gị… M ga-asị na ị bụ nnukwu Ubuntu na Unity fan HAHAHAHA
Abụghị m onye Ubuntu n'agbanyeghị, ọ na-amasị m ịdị n'otu. Gwa m ihe ị chọrọ, mana a hụrụ m nkà ihe ọmụma Mac n'anya. Naanị ihe anaghị amasị m bụ maka ugbu a, ọ bụ naanị maka Ubuntu.
Ọ bụrụ na amaghị m gị… M ga-asị na ị bụ nnukwu Ubuntu na Unity fan
Na m, na m
Nke ahụ na njikọ m hapụrụ n'okpuru, o wetara ọkụ na blọọgụ ya nke metụrụ eriri ndị ahụ ntakịrị.
Eduar 2 dijo
Hahaha m ga-ekwu na ha na-akwụ ya ụgwọ iji kwuo okwu ọjọọ banyere archlinux na ezigbo Ubuntu, eziokwu bụ na ihe ahụ dị ịtụnanya, ọ ga-abụ na ha tọọrọ elav ma gbanwee ya maka ụfọdụ onye ọrụ Mark.
Hahaha mmadụ, ọ bụrụ na Uncle Mark kwụọ m ụgwọ, blọọgụ ahụ ga-agbanwe aha ya, a ga-akpọ ya <° Ubuntu (FromUbuntu) hahaha .. Ekwesịrị m ịdegharị aha obere aha naanị ma ọ bụrụ na ¬¬
Kedu distro ọzọ (ma e wezụga Ubunty na ElementaryOS) raara onwe ya nye ịmepụta interface dị mma maka ndị ọrụ ya?
Mandriva mere ya n'oge ya, nke na-ada ugbu a.
Ihe ọzọ, ọ bụrụ na Gnome dị mfe iji ya bụ otuto nke otu Gnome ahụ, ọ bụghị Canonical
Elav na-ezo aka na-eme ka ọ "mara mma" 😉
Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu, Mandriva nwere ezigbo Gnome site na mbụ
Mana isi ya bụ na ịdị n'otu abụghị ezigbo Gnome. Ọ bụ Shell maka Gnome, ma Mandriva ma Fedora emeghị nke ahụ, naanị tinye ihe osise na Gnome nke ndụ niile.
Gịnị Mandriva mere? Ọfọn ọ bụrụ na ị kwuo ya ... Amaghị m nke ahụ. M dokwuo anya, ọ dịghị oge m kwuru na Gnome dị mfe n'ihi na Ubuntu na-eme ka ọ dị mfe ..
¬ a nwere ezigbo ọnụ n'ọnụ Mandriva eh?
Ana m ekwu na n'ihi na Mandriva Gnome mara mma, ọ dịkwa ebe ahụ tupu Lucid
Kedu ihe ọzọ ị chọrọ Fedora ime? O zughi na okpu uhie bụ otu n'ime ihe na-enye aka na ọrụ gnome. Ma ọ bụ ị chọrọ ịkesa ọzọ na-ewepụ shea?
Anyị anaghị ekwu banyere otu ihe. Ọ bụ otu ihe iweta ihe na Gnome na ihe ọzọ iji mee ka ihe ndị ahụ dị iche ma maa mma maka onye ọrụ ọhụụ. Gnome nwere Shell (maka m Unity n'ike mmụọ nsọ) ma ugbu a ọ na-agbanwe desktọọpụ ọdịnala ya ntakịrị, mana ọ bụ n'ezie ihe ndị ọrụ chọrọ? Agwara m Fedora dika m nwere ike ikwu Mandriva, openSUSE. Ana m ekwu nke a n'ihi na na blọọgụ ndị ọzọ, mgbe ọ bụla isiokwu Ubuntu bilitere, onye ọ bụla na-ezukọta ịsị:
"Ubuntu anaghị etinye aka na ihe ọ bụla, n'aka nke ọzọ Fedora…."
Enwekwara nkowa na onyinye bụ onyinye, onyinye ma ọ bụ onyinye apụtaghị na ọ bụ maka ọdịmma (ọ bụ ezie na o kwesịrị), ọ pụtaghị na onye ọ bụla ga-enwe mmasị na ya.
Ọ dị mkpa inye koodu dịka ọ bụ iji nye ndị ọrụ usoro ịre ahịa. 😀
Obi ụtọ Ubuntu ka na-mmepe. Na olile anya na emerighi ya dika ndi mmadu choro (na uzo obula). N'aka nke m, enwere m obi ekele na enwere distro dị ka ya, n'ihi na ahụmịhe m n'iji ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ojuju ma jisie ike nwee obodo m na-ahụbeghị (n'ihe gbasara ịdị n'otu) na nsogbu ndị ọzọ m jiri.
Enwere m olile anya na emerighi ya dika ndi choro ya
Ọ bụghị na m tụrụ anya nke ahụ, mana ha na-agbanwe obi ha
jisiri ike nwee obodo m na-ahụbeghị (n'ihe gbasara ịdị n'otu) na nsogbu ndị ọzọ m ji mee ihe.
Maazi Iri na Atọ, ị dị oke njọ, achọpụtabeghị obodo nke na-anaghị anabata ndidi, ndị mpako, ndị na-enweghị akwụkwọ na ndị ọjọọ karịa Ubuntu.
Mgbe ọ bụla ha nwere ike ha na ọgba aghara ndị ọzọ, kparịa ndị ọrụ ha, nye data ụgha ma wụfee gị na "anyị niile bụ Linux" mgbe ha kwụsịrị esemokwu, ya bụ, mkparị.
www (dot) muylinux (dot) com N’ebe a ka ihe niile edere bu ubunto
Ee, eziokwu ahụ bụ ihe ihere na enwere ụfọdụ ndị na-ekwusi ike, ekweghị ibe nọrọ na ụfọdụ ụfọdụ na-akparị ndị na-anwa ịgbachitere Ubuntu site na ịhapụ ihe niile na-abụghị Ubuntu. Enweela m ọtụtụ dị ka nke a na forums na blọọgụ dị iche iche. Na m kwenyere na gị.
Mana ekwuru m na, na ahụmịhe m, obodo kachasị nyere m aka bụ Ubuntu, nke na-apụtaghị na ndị ọrụ Ubuntu niile ma ọ bụ ndị na-agbachitere bụ, ma ọ bụ ọbụlagodi na ọtụtụ bụ (iche na nke a bụ arịrịọ) ka ugha nke nkewa http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_de_división
Anaghị m eche onwe m ubuntero, enwere m mmasị ịnwale distros dị iche iche dabara na mkpa m, oge na ihe ọmụma (nke dị ole na ole) n'ọhịa.
Hi ka esi aga
Abụ m onye ọrụ Ubuntu site na nsụgharị 7.X ruo ugbu a, n'ihi na agbaala m ụdị ndị a niile afọ 3 a. Ọ bụghị na m chọrọ Ubuntu ka o mebie, ọ bụ na m kwenyere na ọ nweelarị. Ọ bụrụ na i jiri Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.10 mee ihe, ị ga-echeta etu ha dịruru ukwuu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% kwụsie ike, na agbanyeghị na ụdị ndị ahụ amachaghị nke ọma / nkọwapụta / nkọcha dịka Natty nwere ike ịbụ ugbu a, ha kpara agwa dịka Linux distros, nke ahụ bụ ... , Nsogbu adịghị.
Ọ na - eme na mgbe Ubuntu bidoro ileba anya karịa etu o si ele anya, otu ọ dị, na - etinye nkọwa na nsonaazụ nke ụdị a, ebe ahụ ọ malitere ịbawanye ọgba aghara enyi, ee, mana n'otu oge ahụ enweghị nkwụsi ike.
Banyere obodo, ekwenyere m na gị. Ọ na-akwado ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na-enye gị azịza dị njikere itinye ya, mana this nke a na-akụzi ihe ọ bụla? Dịkarịa ala, m na-ahọrọ na-gwara «Gụọ ihe niile a akwụkwọ na e nwere ihe ngwọta gị: nwoke chọta"Ọfọn, nke a ga-amanye m ịmụ.
Ka o sina dị, onye ọ bụla nwere echiche ya, anyị ga-asọpụrụ ya, ma anyị niile na-eji GNU / Linux, onye ọ bụla nwere obi ụtọ HAHAHA.
Agbalịrị m Ubuntu na nke mbụ ya na 2007 na Feitsy Fawn (ọnwa ole na ole tupu m nwaa knoppix na livecd ọzọ na enweghị m ike icheta aha ya ugbu a). Kemgbe ahụ, m gbalịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsụgharị ya niile ma e wezụga abụọ ma ọ bụ atọ na agbaghara m mgbe m na-eji ụfọdụ distro. Dịka m kwuru na mbụ, emegoro m nke ọma na nsụgharị ndị m nwalere na arụmọrụ na nkwụsi ike.
N'agbanyeghị nke ahụ, amaara m na ọ bụghị ikpe maka mmadụ niile na ọ bụghị na kọmputa niile (ma ọ bụ kọmputa).
Na-enwe obi ụtọ ị nọ na enwere m olileanya na ọ ga-adị otu ahụ. Otu ihe ahụ emebeghi niile, ọbụlagodi n'ụfọdụ, o meela traumas na - enweghị ngwọta (lee anya na nzuzo na obi ike) 😀
HAHAHAHA ọ dị ka onye ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, Ubuntu 9.04 rụrụ ọrụ ebube nye m, agbanyeghị na ụdị a EXT4 na onye ọhụụ vidiyo ọhụụ maka Intel chipsets gụnyere, nke nwere ọtụtụ chinchi. Agbanyeghị, ihe niile meere m nke ọma. 😀
Ọ rụkwara m ọrụ dị ka nne na-enwu enwu!
Ọ bụghị na ọ bụ mmerụ ahụ, ịkpọasị ahụ bụ ekele nye obodo aghụghọ ha nwere, ọ bụrụ na ọ bụghị na m nwere ike ịsị na Ubuntu na-agbachapụ ya na oge, ọ dịghị ihe ọzọ
Site n'ụzọ, enwetara m ihe ndị a na-ekwu
Ọ bụ n'ihi na o doro anya na ị gbanwere ụfọdụ data ị tinyere n'ihu, ị gbanwere (ma ọ bụrụ na anaghị m emehie) URL ma ọ bụ weebụsaịtị, ị nwere nke ugbu a? 😀
Ee, a na m enyere gị aka ntakịrị.
Ee ee, eziokwu bụ na nsogbu niile ahụ m zutere n'oge ụfọdụ n'iji Ubuntu enweela azịza ya.
N'ikwu okwu banyere trauma, heh, naanị otu ihe mgbagwoju anya nke kpasuru m iwe (ọ bụ ezie na emesịrị m merie ya) bụ Mandriva (nke abụọ nke ugboro atọ m gbalịrị ya) n'ihi na mgbe emelitere mmelite ihe niile dara (na anaghị m ekwubiga okwu ókè) ruo banye kernel ụjọ, hehe.
Naanị nke m nwere nsogbu (n'ihi na ọ zụliteghị m) bụ Mageia 😀
Ysmụ okorobịa m ga-ewelite ubuntu 10.10 gaa na 11.10 na-enweghị ịhazi ma wụnye shen gnome, nsogbu enwere? Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Inwe na ima elu bụ mma na ị wụnye site ọkọ
M ga-agwa gị site na ahụmịhe m site na iji Ubuntu 🙂
Mgbe m mere mmelite site na ihe atụ, 8.04 ruo 8.10 ihe niile gara nke ọma, mana na nsụgharị ndị a ebe ọtụtụ mmadụ gbanwere (10.10 ruo 11.10), na ndị ọzọ na-eche na ị na-agbafe 11.04, m ga-akwado ịwụnye 11.10 a site na ncha.
Agbanyeghị, mee nkwado ndabere nke data gị ma melite dị ka ị zubere, ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma a ga-enwe ọ haụ haha, ọ bụrụ na ọ ga-adabaghị na ị ga-etinye Ubuntu, nke bụ ihe ọ bụla site na ụwa ọzọ 😉
Na nkenke ... chekwaa ihe ndị dị mkpa gị ma nwaa ya, mee mmelite ahụ ... o kwesịghị ịrụ ọrụ nke ọma, mana na nke kachasị njọ ị gbanyeghachi Ubuntu na ọ bụ ya 😀
Ọ bụrụ na m echeworị na ihe kachasị nchebe bụ nrụnye dị ọcha, mana hey, m ga-anwale mmelite ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ ga-ezighi ezi ịwụnye ọzọ nke dị mfe. daalụ maka azịza gị 😉
Nah obi uto inyere gi aka 😉
Ekele ma gwa anyị otu o si gaa 😀
ODF 1.2 kwadoro dị ka ọkwa ọhụrụ
Asingba ikike ikike na Zentyal (ochie Ebox)